Wasiir Goodax Barre “Imtixaankii Puntland Waa Fashilmay” (Video) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Wasiir Goodax Barre “Imtixaankii Puntland Waa Fashilmay” (Video)
May 19, 2019 admin279
Wasiirka Wasaarada Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ku sugan Magaalada Jowhar ee Caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa uu sheegay in uu fashilmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Puntland.
Wasiir Goodax Barre ayaa sheegay in saacadan la joojo imtixaankii saakay ka bilowday deegaanada maamulka Puntland oo ay u fariisteen in ka badan 15,800 oo arday uu si toos ah u fashilmay.
Sidoo kale Wasiirka Waxbarashada Dowladda Federaalka ayaa kulan Jowhar kula qaatay Madaxda sare ee dowlad Goboleedka Hirshabeelle,Macalimiinta waxka dhigta Iskuulada ku yaalla halkaasi iyo mas’uuliyiin kale.
Dhinaca kale Cabdullaahi Goodax Barre ayaa kala duwan Caawa ka wada Jowhar,kuwaasi oo looga arrinsanayo arrimaha la xiriira Imtixaanka Shahaadiga oo ay qaadeyso dowladda,isla markaana ah mid ku celis ah,kadib markii uu fashilmay midkii dhawaan la galay.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xusay in Arday Maamulkiisa uu mas’uulka ka yahay uu Imtixaan u gaar ah u sameysan doono.
Magaalada Jowhar waxaa gaaray Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Federaalka,Wasiirka amniga,iyo xubno ka socday Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka,iyadoo halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay.
halkaan ka daawo hadalka wasiirka.
Gaari ay Arday saarneeyeen oo lagu rasaaseeyey Muqdisho
Maxaa ka cusub Wadahadalka Madaxda Sare ee Galmudug?
Wasaaradda A.Gudaha oo sheegay inaysan aqoonsaneyn Natiijo kasta oo ka soo baxda Doorashada Jubbaland.